Noocyada naqshadeynta garaafyada | Hal-abuurka Online
Noocyada naqshadeynta garaafyada
Maryan Rose | | Design Graphic
El naqshad sawireed waa xal danaynaya isticmaalka sawirka en el xeradao de la dadweynahatay, la edhalkanon y la qorsheificacion de la wargalinacion. Se boqolkiibara en la foomkaa en in se trata el Ogowentagay de la wargalinacion con el dhamaadka de in el mhubintaaje puda Ser ENTdhamaadkatagay apropiadaammine by el usuario. Taasi waa sababta ay u jiraan noocyo kala duwan oo naqshadeynta garaafyada si loo fuliyo nidaamkan oo dhan.
Garoonkani waa muy amplio en el in cawsemos onontrar una geedka kala duwanad de profesionwaa Sidoo kale, Waa muhiim in la ogaado noocyada naqshadeeyayaasha garaafyada jira. En waaa seiccon te vamos a comENTar kuwa ugu waaweyns noocyada naqshadeynta garaafyada in cawsemos onontrar en el meerkurado. para in así, sepas cuál es la in mejor se la qabsadaana a tu persilig.
1 Waa maxay naqshadeynta garaafka?
2 Waa maxay noocyada naqshadeynta garaafyada ee jira?
2.2 Naqshadeynta xayeysiinta
2.3 Naqshadaynta Shirkadaha
2.6 Naqshad 3d
2.7 Naqshadeynta Webka
¿Qué es el u sheegño gráfico?
El u sheegño gráfico es el hawlo u oggolaanaya abuuritaanka nidaam garaafyo oo buuxiya baahiyaha macaamiisha. Waxa loo adeegsadaa in lagu faafiyo fikrad ama fikrad iyada oo loo marayo sawir. Ujeeddada laga leeyahayna waa in maskaxda qofka eegaya looga tago farriin xooggan.
Ujeeddadeedu waa cilmi baarista iyo naqshadeynta alaabta garaafyada.os. A traviyo de una Serie de habsocodimIentos in agruPan las técNicas del marketing, la dadweynahatay, la comunicacion, la totaltay de ka métodos y técNicas in ogolaanshahaen alawooddozar la fiisadaion y la compcarruurtasion del macmiilkae y el walaxetwaan tagay tiirinuwaao by la emphagardaamo.
Waa maxay noocyada naqshadeynta garaafyada ee jira?
El u sheegño gráfico tiene una amplia kala duwanad de tipos y waailos, cADA uno aplicbuuqaysaan a un walaxetwaan tagay difqotonsane. Ujeedada ugu weyn ee mid kastaa waa in la go'aamiyo waxyaabaha loo baahan yahay si ay fariin ugu gudbiyaan dhagaystayaasha. ka mabda 'ales tipos o cldameero de u sheegño gráfico uu:
Naqshadaynta garaafyada noocan ah waa mid ka mid ah mace conocbaxay y Faa'iido lehizados. ÉHockstein es el tipo de u sheegño in se usa en libros, revists, diAryans, columnas, iwm. Naqshadaynta tifaftirka waxa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo macluumaadka, qoraalada iyo xayaysiisyada u dhigma isla goobta ganacsiga. Tiene como walaxetwaan tagay la joogaacion de la wargalinacion waayo, in el lekoronto-dhaliye o el usuario la ENTimarka de una foomkaa esaxaradaVAT Markaa in el mhubintaaje Badda ENTdhamaadkatagay de laberey rápida y clara.
by ejeplo, una página en blanco pude Ser niyad jabrante waayo, un lekoronto-dhaliye, byin maya sabe cuáka uu las págorgoras in of a yimaadoir ka dibuwaa En cAmbio, una página con colsaliid y elementos gráficos pude Ser badano mace atracVAT IYOl lekoronto-dhaliye se dirayirá mace KOOCIibuuqaysaan y seguro de qué va a onontrar en las siguIentes págorgoras.
Nashqada xayaysiinta se loo isticmaalo in lagu xayeysiiyo shirkad ama ganacsi. Pära ello, se Faa'iido lehizan difqotonsanes elementos como la mala awaalen jirativa, la kumuunayaashaeta de colsaliid y el tipo de hara en madadaalocion del wax soo saarkao in se oo ka mid ahea joogaar. Naqshadaynta noocaan ah debe acompañdameer de una xeradaa.a de dadweynahatay in sidapla ka walaxetivos tiirinuwaaos.
Marka laga hadlayo utility waxaan dhihi karnaa waxay ku saabsan tahay dar a conocer wax soo saarkaos, nuevos adeegmacruufka, iwm. Sidaa darteed, se oo ku salaysan hababka kala duwan ee isgaadhsiinta ballaaran. Galidre isaguos onontwanos a la xayaysiis daabacaadda, raadiyaha, telefishinka iyo intarneetka oo aad u dambeeyay.
DCiiseño jiratwaan tagay
Naqshadaynta shirkadu waa naqshadda loo isticmaalo in lagu soo bandhigo shirkad, calaamad ama qof. ÉHockstein se Faa'iido lehiza waayo, dar a conocer la emphagardaamo y su waailo, las baabuurjilaaídhegeystaas, iwm. EHockstein tipo de u sheegño se Basa en la Faa'iido lehizacion de colsaliid y elementos gráficos in llAamiin la atencion del púbshatio y le ogolaanshahaan isku dhafkardameer con el texto joogabuuqaysaan.
Doorka nooca naqshadeynta se la sameeyay si loo gaaro muuqaal isku mid ah dhammaan alaabooyinka, falalka iyo xaaladaha shirkadda. Magaca farsamada waa sumadaynta.
Sawirku wuxuu ku salaysan yahay sawirka garaafka ee walxaha, dadka, meelaha iyo dhacdooyinka. A lo weyno de su taariikhyahania, la ilustcunsuriyaddaion ha ido evolucioniyo a traviyo de fogINTas corritaanes tahayídhegeystasida. CADA una de isaguas con un waailo y una foomkaa de EXPQaraarkaion tiirinmacruufka. Aunin el fikraddao de ilustcunsuriyaddaion se asocia caadadamaskaxdae a la wakiilacion gráfica de walaxetos o qofsida.
Intaas waxaa sii dheer, tiene una codsi aad u ballaaran, como lo muwaara la sawir gacmeed, in englObama ilaados ka qalabes gráficos muuqaalkawaxaa. Sida la sawir-suugaaneed, in incluye la ilustcunsuriyaddaion de libros, revists, karteles (dadweynahatay) y demace qalabes gráficos.
El baakadaha waa baakadaha alaabta, es Decir, ilaado lo in dirielve alaabta. waao incluye:
ka qalabes con ka in waaá dharado.
Su foomkaa, su tamaño, su midabka, su u sheegño
La etwaa maxaydibadda eta e gudaha
El Embalajey el gaadiidkae
La joogaacion iyo la comerciilizacion
Taasi waa, kudo lo in hxiddiga in las meerkurANCías sean dib u dhisocbles, atracweel y compradas by el cunoidor.
Naqshadaynta 3D waa farsamo bixinaysa suurtogalnimada ku sawir walxaha adigoo kaashanaya kombuyuutar. Suurtagalnimadani waxay u oggolaanaysaa ma aha oo kaliya in la naqshadeeyo laakiin sidoo kale in la sawiro oo la ogaado qaabka shay ka hor inta aan la abuurin. Si kale haddii loo dhigo, waxaa la odhan karaa in design 3D wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawirto fikrad ka hor intaadan sameynin.
Este wuxuu ku saabsan yahay qabso dhammaan sifooyinka alaabta, incluydhammaad qalabes, foomkaas, texturas, colsaliid, iluminacion, taasoo la micno ahibiltay a la luz, xeelado y MOVimIento. Sida for faa'iidooyinka, eerece una Solicuon óptima y efaqoon lehe al caso de in maya jiraan iyadawanIentas ni qalabes de dharacion jiraENTes waayo, la Soo saariccon del walaxeto.
Naqshadaynta shabakadda es la qaybe hal abuuriva del proyco web, es Decir, maxaa lagu arki doonaa browserka. Se trata de in la sameeyo qaab-dhismeed iyo xalal macno siinaya qaab-dhismeedka web. Xalalkani waa inay ogolaadaan dar nasashouwaa a las nemarkaasidadeska de ka macmiilkaes de una foomkaa fábaalal-il, rápida y eficaz.
hay in tjan en cugeli in la web waaá en joogto ahe cAmbio. Pues las tecnogías cAmbIan y se dhabta ahizan así como las foomkaas de dhugashoionar el u sheegmaya by lo in es nemarkaasario tjan ka conocimIentos sufaqoon lehes waayo, oo ka mid aharrollar unas waaruxuras de u sheegño web in se la qabsadaanen al nuevo Macnaha guudo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Noocyada naqshadeynta garaafyada